अभिभावक को बैठक को मिनेट - शिक्षकहरूको उत्तरदायित्व को फारम
गठन, सोधिने प्रश्न शिक्षा र विद्यालय
अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन किंडरगार्टन समूह मा पारंपरिक एक त्रैमासिक आधारमा आयोजना गरिन्छ। तिनीहरूले आमाबाबु र शिक्षकहरूलाई दुवै बाट arising मुख्य मुद्दाहरू छलफल। को साक्षर दस्तावेज शिक्षकहरू अप अभिभावक बैठक मिनेट बनाउन। यो सहभागीहरू, छलफल विषय, वक्ता संख्या संकेत (शब्द को अभिभावक साँघुरो विशेषज्ञहरु बाहेक प्रदान गरिएको छ भने)। घटना पछि, आमाबाबुले यसरी न्याय यसको उपस्थिति र अनुपालन पुष्टि, साइन इन गर्नेछ।
को किंडरगार्टन मा प्रोटोकल आमाबाबुले सभाको शिक्षा कर्मचारी को अनिवार्य कागजात सूचीमा समावेश छन्। तपाईं विभिन्न समस्याहरू, समस्या परिस्थिति सामना भने, तिनीहरूले प्रशासन र निरीक्षण पार्टी प्रस्ताव छन्।
यस परिचयात्मक बैठक प्रिस्कूल अर्को समूह अघि भ्रमण, विशेष गरी यदि आयोजित छ स्कूल वर्ष को शुरुवात, वा पहिलो पटक लागि किंडरगार्टन आए।
यो घटना मा, बच्चा को कानूनी प्रतिनिधिहरु, स्थापना शासन थाह आमाबाबुले 'समिति द्वारा निर्वाचित। अभिभावक सभाहरूमा मिनेट सबै दस्तावेज सुनिश्चित गर्न लिएको गरिनेछ। यस परिचयात्मक बैठक वर्तमान आर्थिक समस्या र एक किंडरगार्टन समूह छलफल मा, खिलौने, खरीद को संभावना तय कार्यालय आपूर्ति, मर्मत वा पुरानो फर्नीचर को प्रतिस्थापन लागि आवश्यकता। शिक्षकहरूलाई थाहा र एक निश्चित उमेर मा बच्चा गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने स्कूल वर्षको लागि सेट लक्ष्य, बारे आमाबाबुले जानकारी व्यक्त।
पहिलो बैठक पूर्वप्राथमिक विषय मा नव आइपुगे बच्चाहरु को आमाबाबुको लागि केहि फरक छ। नियम, यो किंडरगार्टन गर्न अनुकूल मा सम्भव समस्या, अधिकार र बच्चाको कानुनी प्रतिनिधिको को दायित्व छलफल। ती वर्तमान द्वारा हस्ताक्षर भएको थियो जो आमाबाबुले 'बैठक प्रोटोकल, बनाउने, आमाबाबुको साथ समस्या परिस्थिति को घटना मा एक किंडरगार्टन को कर्मचारीहरु यी मुद्दाहरू घटना छलफल गरियो कि दर्शाउन मौका छ। र सबैले निर्णय सहमत भए।
आमाबाबु, विशिष्ट समूहको रूपमा सञ्चालन हेरविचारकर्ताओं र संस्थाले को प्रशासन संग बैठक शैक्षिक प्रक्रियाको सिनर्जी एक रूप हो। यसबाहेक, यो फारम यसको अस्तित्व को सारा समयमा प्रभावकारी साबित भएको छ। चलचित्रहरू र कम्प्युटर प्रस्तुति को जाँच,: हालैका वर्षहरूमा जस्तै गतिविधिहरु सञ्चालन मा सक्रिय विभिन्न नवाचारै द्वारा प्रयोग गरिन्छ परियोजना काम। तथापि, अभिभावक को बैठक को मिनेट अझै पनि, यो घटनाको मुख्य प्रमाण मध्ये एक छ रूपमा।
प्रिपेरेटरी समूह मा आयोजित अभिभावक सभा, पनि, आफ्नै विशेष छ। अक्सर, तिनीहरूले सानो समूह consultations पकड साँघुरो विशेषज्ञहरु (भाषण चिकित्सक, शिक्षक, र शिक्षकहरूलाई, मनोवैज्ञानिक) आमन्त्रित गरिन्छ। उत्तरार्द्ध बैठक, आमाबाबु र हेरविचारकर्ताओं प्रोम दिनको लागि तयारी को auspices अन्तर्गत आयोजित र घटनाको फारम निर्दिष्ट छन्।
पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु को आमाबाबु, एक किंडरगार्टन को पर्खालहरु छोडेर नयाँ सभाहरू लागि तयार - शिक्षकहरूलाई र विद्यालय प्रशासन संग।
अर्को एक एजेन्सी प्रतिस्थापन, शिक्षकहरूलाई र बच्चा को कानुनी प्रतिनिधिको बीच अन्तरक्रिया आधारभूत फारम एक आमाबाबुले 'बैठक छ। तिनीहरूलाई प्राथमिक विद्यालयमा आमाबाबुले सभाको रिपोर्टहरू र फेरि आफ्नो हस्ताक्षर राख्नु अघि पहिले नै यस्तो घटनाहरू आमाहरु र बच्चाहरु को dads को पहिलो यात्रा समयमा हेर्नुहोस्।
एक समलम्ब को क्षेत्र
स्कूल निबंध मा शरद ऋतु को विवरण
यस समन्वय विमान मा दूरी कसरी पाउन
Mnemosyne - ठूलो प्राचीन ग्रीस को स्मृति को देवी
दनोन ( «दनोन") - प्राकृतिक दही: क्यालोरी, राम्रो सुविधाहरू समीक्षा
पुस्तकको ISBN - कोड कस्तो र कसरी प्राप्त गर्ने?
परी कथा वर्ण Emelya: आफ्नो हातमा एक छुट्टी लागि पोशाक
को "हिम सेतो" बाट dwarves नाम सूची। तपाईं धेरै मान्छे थाहा छ?
हेर्छ जाक Lemans, समीक्षा
"Berodual एच" Aerosol। विवरण
ग्रह को 10 भन्दा सुन्दर मानिसहरू
घाम पटोंग होटल3* फुकेत, थाईल्याण्ड: तस्बिर र समीक्षा
किन सपनामा डूब को सपना?
कारण, लक्षण र एलर्जी conjunctivitis को उपचार
लारा क्र ाफ्ट गर्ने खेल्छ? जवाफ एकदम सरल छ!